Lone Survivor (2013) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
R 2013 121 min Biography, Drama
ဒီတစ်ခါတော့ စစ်ကားကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် စစ်ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်….
ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့သလိုပဲ ၂၀၁၄ အစရဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်….
ဒီကားက တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် Red Wings Operation ကို ဇာတ်အိမ်တည်ရိုက်ကူးထားပြီး၊ ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားတွေကို အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်…..ဇာတ်လမ်းကတော့ Trailer မှာပါတဲ့အတိုင်း Navy SEAL လေးယောက်က တာလီဘန် ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ကို အပြတ်ရှင်းဖို့ သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ရှိနေတဲ့နေရာကို ဆိတ်ကျောင်းသား သားအဖကရောက်လာ ပြီးတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ Rules of Engagement (စစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့စည်းကမ်းတွေလို့ ယေဘူယျ ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်) အရ ကလေးတွေ၊ လက်နက်ကိုင် မဟုတ်တဲ့ အရပ်သားတွေကို မသတ်ပဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ရင် သူတို့ နောက်မှာ တာလီဘန် တွေလိုက်လာမှာကို သိရဲ့နဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အထူးလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ Navy SEAL လေးယောက်နဲ့ တာလီဘန် အယောက် ၂၀၀ကျော်ရဲ့ အပြန်အလှန် တိုက်ပွဲကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့နာမည်အရလည်း ပရိတ်သတ်ကြီး ခန့်မှန်းမိနေမှာဖြစ်သလို၊ ဒီကားရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရှာကြည့်ထားတဲ့ သူတွေလည်း သိနေမှာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ ၄ယောက်မှာ ၁ယောက်ပဲ အသက်ရှင် ပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းက Navy SEAL တွေ ရဲရဲရင့်ရင့် တိုက်ခိုက်ပုံ၊ စွန့်လွှတ်အနစ်အနာခံပုံတွေကို ပရိတ်သတ် ရင်ထဲရောက်အောင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ရဲရင့်မှု၊ စစ်သား ကောင်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ် ရေးရာ ရဲရင့်မှုတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းမှာ သူတို့လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ ထဲက အာဖဂန် ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာမှာ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှု၊ မုန်းတီးမှုတွေ၊ ပြည့်နေပေမယ့်၊ နောက်ဆုံးမှာ မင်းသားကို ကယ်ခဲ့တဲ့ အာဖဂန် တွေကတော့ လူစိတ်ရှိတဲ့ လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ (အာဖဂန်တွေက သူတို့ ရန်သူနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူကို ကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကြောင့် ကယ်တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တာလီဘန်တွေက အာဖဂန် တွေကိုလည်း သတ်ဖြတ်ပါတယ်။ အခုထိလည်း အာဖဂန် တွေနဲ့ အစွန်းရောက်တာလီဘန်တွေ စစ်ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ)ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ကားပါ။
Saving Private Ryan ပြီးနောက် အကောင်းဆုံး စစ်ကားတစ်ကား လည်းဖြစ်ပါတယ်…စစ်ကားကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ကတော့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်….
(ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက် (Movie Reviews) မှကူးယူဖော်ပြသည်…)
Option 1 drive.google.com 572 MB SD (480p)
Option2mfile.cloud 572 MB SD (480p)
Option4onedrive.live.com 572 MB SD (480p)
Option5megaup.net 572 MB SD (480p)
Option6mfile.cloud 1.4 GB HD
Option 10 onedrive.live.com 1.4 GB HD
Option 11 mfile.cloud 3.4 GB FHD DTS 5.1
Option 13 drive.google.com 3.4 GB FHD DTS 5.1
Option 14 onedrive.live.com 3.4 GB FHD DTS 5.1